शब्दकोश: March 2011
काठमाडौंको तापमान धरहरामा उक्लिँदैछ । तर कतिबेला चिसो हावा चल्छ र कतिबेला हप्प हुन्छ, यहाँको मौसमको कुनै ठेगान हुन्न । टन्टलापुर घाम लागेर छ्‌याङ्ग खुलेको दिन अकस्मात् झरी बर्सिन्छ । आकाश धुम्मिएको देखेर घरबाट छाता बोकेर निस्कयो, त्यो दिन छिटा पानी पर्दैन । अनि भोलिपल्ट मौसमको सामान्य अवस्था देखेर निर्धक्क खाली हात हिंड्यो, पानीले चुटेर मुसो बनाउन बेर लगाउँदैन । यस्तो अवस्था धेरै पटक खेप्‍नुपर्छ राजधानीका बासिन्दाले ।
गर्मी जसै बढ्दै जान्छ, न्युरोड इन्द्रचौकको एउटा कुनाको मौसममा भने सधैं उस्तै रौनक देखिन्छ । एकनासको गति । पङ्क्तिब द्ध मानिसहरू धाराको पानी थाप्‍न लाइन लागे झैं एकसुरमा देखिन्छन् । झरी बर्सिएर मानिसहरू ओत लागेका पनि होइनन् । नजिकै खुला रूपमा खोलिएका ओढ्ने पसलहरूमा बर्कोको मोलमोलाइ पनि कोही गरिरहेका छैनन् । बरू आफ्नो रुखो आँतलाई शान्त पार्न लस्सी खानेहरूको त्यहाँ भीड लागेको पाउनुहुनेछ । घमाइलो दिनमा तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो भने गुरुम्म भीडले सेतो गिलास समाएर ठाडो घाँटी पारिरहेको देख्‍न सक्नुहुन्छ । जनकपुर दही लस्सी भण्डारको के छ त्यस्तो विशेषता, एकचोटि स्वाद चाखेपछि फेरि-फेरि त्यो रुट हिंड्दा त्यो चिनाजाना स्वाद लिन मन लागिहाल्छ । (विज्ञापन नै गरे जस्तो भयो है :-) राम्रो कुरा सबैलाई जानकारी दिँदा विज्ञापन हुन्छ भने त्यो नै सही !)
त्यो लस्सी भण्डारको प्रभाव कस्तो छ भने, त्यसको सिको गरेर अलि पर अर्को लस्सी भण्डार खुलेको छ । जहाँ बिचरा पसलेले लस्सी पसलको नक्कल गरे पनि त्यो गुणस्तर भने आफ्नोमा कायम गर्न सकेको छैन । नचाहेको हो या नसकेको हो, कमसल गुणस्तर बेचेरै ग्राहकलाई उल्लू बनाएर पल्लो छेउको असली लस्सीलाई छेड हानिरहेझैं लाग्छ । कसैले कुनै काम वा व्यवसायमा राम्रो गर्‍यो भने, गहिरो गरी नविचारी हत्त न पत्त त्यही काम नक्कल गरिहाल्ने हामी नेपालीको प्रवृत्ति लस्सी पसलले पनि चरितार्थ गर्‍यो ।
जनकपुर लस्सी भण्डारमा झुम्मिने मान्छेहरू साँगुरो सडकमा ठोक्किइहालूँला भने झैँ गुडिरहने सवारी साधनको भय पचाएर लाम लागिरहेका हुन्छन् । ठूलो गिलासको ३० र सानोको २० रुपैयाँमा पाइन्छ लस्सी । भड्डुको भाँडामा दही, आइस, चिनी मिसाएर घोलेर लस्सी बनाउँदै गिलास भर्दै गरेका भेटिन्छन् मोटे दाइ । तपाईँको गिलासमा सोझै लस्सीको झोल मात्र आइपुग्दैन; काजु, किसमिस, रावडी र क्रिम पनि सरक्क माथितिर तरपरिएको पाउनुहुनेछ ।
यस हिसाबले स्वादिलो मात्र होइन, पोषिलो पनि मान्नुपर्ला लस्सीलाई । आइस मिसाएकाले केही बिगार चाहिँ गर्ला कि ? नत्र प्रायजसो दही वा कागती-चिनी-पानीको सर्बत र मोही खाने स्वाद बसेको हाम्रो जिभ्रोले पक्कै नौलो स्वाद पाउनेछ लस्सीबाट । कुनै दिन गर्मीले रुखिंदै न्युरोडको इन्द्रचौक पुग्नुभयो भने लस्सी स्वाद लिएर आफैं पारख गर्नुहोला । स्वादको गलत व्याख्या गरेको रहेछु भने कारबाहीको भागीदार बनूँला । :-)
अपडेट : दूधको मूल्य बढेसँगै चैत १४ गतेबाट लस्सीको भाउ पनि बढेछ है । ठूलो गिलासको ४० र सानो गिलासको २५ रूपैयाँ पुगेछ । छेउको कमसल स्वादवाला लस्सी पसलले पनि मूल्यवृद्धिको सिको नगर्ने कुरै भएन ! महँगीले लस्सी धरीलाई छाडेन बा !
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, March 30, 20115: Comments
मन्दिरै मन्दिरको देशको रूपमा परिचित छ हाम्रो नेपाल । जहाँ देवीदेवताको मूर्तिका खचाखच भीडको हिसाब गरिसाध्य छैन । हिन्दू आख्यानमा तेत्तीस कोटि देवताको चर्चा गरिएको पाइन्छ । तीर्थ-व्रत गर्न थाल्यो भन्ने सिङ्गो जीवन त्यसमै बित्दो हो । हामी युवा भने धार्मिक आस्थाले भन्दा बढी घुमफिरको गन्तव्यको हिसाबले धार्मिक थलो चहार्छौं । पूजा-आराधना गर्ने जिम्मा पाकाहरूको भागमा भन्या जस्तो छ । अनुभवको आरनमा पाक्दै गएर बुढेसकालमा ‘आखिर श्रीकृष्‍ण रहेछ एक’ भनेर चेत फिर्ने भएकाले हो कि ?
एसियामै भगवान् शिवको अग्लो मूर्ति भनेर प्रचारित भक्तपुरको साँगास्थित शिवमूर्तिसँग साक्षात्कार गर्ने जाने मेसो बल्ल मिल्यो । भक्त होइन, घुमक्कड भएर गइयो । निकै भीमकाय रहेछ मूर्ति । पहाडको टुप्पोमा केही खुला परिसर घेरेर बगैंचासहित निर्माण गरिएको ठाउँ मनमोहक छ । काठमाडौंबाट बनेपा जाँदै गर्दा सडकबाटै प्रस्ट देखिने उँचाइमा छ मूर्ति ।
डाँडामा पुगेर तलतिर वरिपरिको फाँट हेर्नु अर्को रमाइलो पाटो लाग्यो । भगवान्‌को दर्शन गर्न जाने श्रद्धालुहरूको उद्देश्‍य र सरोकार मूर्ति मात्र हुन सक्छ, तर घुमन्तेहरूको लागि ताजगी पाउने नयाँ ठाउँ हो साँगा ।
घुम्न जानेहरूमध्ये धेरैजसो चाहिँ ठिटा‍ठिटी जोडी भएर पुग्दा रहेछन् । एक्लै टहलिन जानेहरू कार्टुन बन्ने खतरा ! अचेल राजधानीभित्रै विभिन्न देवालय र मन्दिरमा प्रेमालाप गर्न पुग्ने ठिटा-ठिटीमध्ये कतिजना आपत्तिजनक अवस्थामा भेटिएको खबर सुनिन्छ । पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा त पशुपति क्षेत्र विकास कोषले त्यस्ता अभद्र जोडीलाई पक्रिएर जरिवाना नै गर्‍यो । यस्तो अवस्थामा साँगा त झन् भीडभाडभन्दा अलि परको ठाउँ, जोडीहरूको घुमघाम केन्द्र र प्रेमको साक्षी बन्ने नै भयो । तर एक्लै साँगा पुग्नुभए पनि नआत्तिनुस्, तपाईँभित्रको यायावरप्रेमी मन सधैं तपाईँको साथीको रूपमा रहने नै छ । जो एक्लो छ, उसको यो सिङ्गो प्रकृति र यहाँका सम्पदा छन् ।
घुमिसकेर थुम्कोबाट मूलसडकतिर ओर्लिँदा अर्कै बाटो एकछिन हिंड्न मन लाग्यो । धुलौटे बाटो खेतका फाँट हेर्दै हिंड्दा गाउँतिर पो लरबराउँदैछु जस्तो अनुभूति भयो । यो चैत मासमा भने गहुँको बाली झुलिरहेको हुँदो रहेछ साँगातिर । किसानको नीलो पसिनाबाट सिर्जित खेतीको हरियो बाछिटाले मनसम्मै भिजायो । काठमाडौं खाल्डोभित्र हराभरा चिज सिला खोजे झैं गर्नुपर्ने अवस्थामा हरियालीको बाढी नै आँखाभरि उर्लिन आयो ।
बस चढ्ने बेला पनि फरक्क शिर मोडेर साँगा थुम्कोतिर हेर्दा ठिङ्ग उभिएरै दर्शन दिइरहेछन् शिवजी । विराट् स्वरूपमा ठाँटपूर्वक उभिएका साँच्चैका ‘महादेव’ न ठहरिए, पर पुगिसक्दा पनि पछ्‌याउन छाडेका थिएनन् ।
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, March 28, 20112: Comments
नेपाली साहित्यिक जमातमा एकथरीले गजललाई आयातीत विधा भन्दै गाइने गीतको संज्ञा दिए पनि पछिल्ला वर्ष गजल लेखन साहित्यको मूलधार झैं बनेर उर्लिएको छ ।
त्यही शृंखलामा युवा गजलकार डा. निरज भट्टराई गजलसंग्रह 'तलाश' लिएर पाठकमाझ आएका छन् । गजलका किताब प्रकाशनमा निरन्तरता जस्तो देखिए पनि यसमार्फत गजलकारले आफ्नो अलग पहिचान कोर्न मिहिनेत गरेका छन् । ५१ थान गजल समेटिएको कृतिले नेपाली गजलमा कायम परम्परागत कोमल र शृंगारिक विधाको चिनारी टकटक्याउँदै बौद्धिकताले पोसिएको काव्यिक स्वाद पस्किएको छ ।
त्यसो त बडो मुश्किलले हाम्रो तस्वीर बनाइन्छ
जब बनाइन्छ काँधमाथिबाट शिर हटाइन्छ ।
मलाई मैनका खुट्टा दिएर जानेले भनेका छन्,
'अबदेखि तेरो बाटोभरि आगो बिछ्‌याइन्छ ।'
फारसी, उर्दू र हिन्दीको पोषण हुँदै दरिलो तिघ्रामा उभिएको नेपाली गजलले संख्यात्मक रूपमा गजलकार तथा गजलहरू पाएअनुसार हल्काफुल्का लेखनको पनि प्रवेश हुँदा यसको बजार साहित्यको बौद्धिक जमातमाझ केही सस्तिएको पाइन्छ । मूलधारका नेपाली साहित्यिकहरूको दृष्टिमा गजलको परिसूचक त्यसरी ओरालो लागिरहेको बेला निरजका गजलले केही ओटको काम गर्ने सामर्थ्य बोकेको देखिन्छ ।
रा जनीतिक दिशाहीनतामा मुलुक लामो समयदेखि छटपटाइरहेको परिवेशमा निकासको खोजीलाई संग्रह 'तलाश'को नामले मुखरित गर्न खोजेका छन् गजलकारले । गजलका सेरहरूले पनि यहींका मान्छेहरूको छटपटी, अत्यास, केही आश र सपनाहरूको साझा भावना उनेका छन् । अझ उनका गजलले भावगत तीव्रता भन्दा वैचारिक गम्भीरताको वकालत गरेको भन्दा न्यायसंगत हुन्छ । पीडालाई विषय बनाइएको गजलमा पनि गजलकार स्वाभाविक आँसु मात्रै बगाउँदैनन्, त्यो आँसुमा धारिलो पत्र पनि छचल्काउँछन् ।
परम्परागत अभिव्यक्तिबाट अलग्गिएर चोखा शब्द चलाउने निरजका गजलले पाठकसँग बौद्धिक बात मार्छन् । तर सँगै, उक्ति विचित्रता र तार्किक शैलीका कारण नयाँ बान्कीको लेखनमा बानी नपरेका पाठकलाई उनका कतिपय गजल सम्प्रेषणमा अक्कर पहाड पनि लाग्न सक्छन् । तिनलाई काव्यिक एवं दार्शनिक उचाइमै गएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय सेरमा गजलकारले भाषिक बलमिच्याइँ पनि गरेको देखिन्छ । यस्तो दोष यति वजनदार संग्रह ल्याउने सर्जकबाट अपेक्षा गरिन्न । थाहा पाई-पाई 'चल जाएगा' प्रवृत्तिको सिकार भएर भाषिक विचलन, वर्णविन्यास र व्याकरणगत त्रुटि दोहोर्‍याएको भान हुन्छ । गजलका आधारभूत प्राण काफिया र रदिफको संयोजन गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा नाम र क्रियापदको संगति बेमेल भएको 'फलाम गर्ने' जस्तो वाक्यांश समेत लेखेका छन् गजलकारले ।
संग्रहका अधिकांश गजलका सेर सर्वमान्य जीवनदर्शन झैं सूक्तिमय छन् । सूक्ति र तर्कपूर्ण सेरहरूको खजाना भरिएको दराज भन्दा हुन्छ यो संग्रहलाई । अकाट्य विषय-प्रसंगलाई कलात्मक बुनोटमा भरिएको छ । बोलीचालीको अभिव्यक्ति शिल्पमा लेखिएका गजल टेबल गफ जस्तो सहज पनि लाग्छ ।
केही झलक :
भक्तहरूसँग ईश्‍वर पराजित भए
अनि मन्दिर र मस्जिदमा विभाजित भए ।
यता उसले रुख काटेर घर बनायो,
उता चराहरू घरबाट विस्थापित भए ।
कि अनुहार हुनुपर्छ कि होनहार हुनुपर्छ
होइन भने बाँच्नलाई बेग्लै संसार हुनुपर्छ ।
म रुख हल्लाएर झारिदिन्छु माटोमा ताराहरू,
मसँग तिमी हुनुपर्छ र तिमी तयार हुनुपर्छ ।
यस्ता सशक्त र हक्की भाव भरिएको गजल संगीतबद्ध गर्नेभन्दा मञ्चकेन्द्रित हुन्छ । हिन्दी साहित्यमा रत्तिएका पाठकले संग्रहभित्रका गजल पढ्दै जाँदा गजलकारमा त्यताको प्रभाव चुलिएको छनक पाउनेछन् । हिन्दी गजलको प्रभावको मातले उनले कतिपय गजलमा नेपाली लेखनभित्र सुपाच्य नहुने हिन्दी शब्द समेत घुसाएका छन् । प्रविधिको जालोले विश्‍व एउटा गाउँ बनिसकेको उदाहरण अगाडि सार्दै कुनै पनि कुरा पराइ नहुने व्यापक सीमारेखा कोरे भाषिक पहिचान र निजतामै संकट आउने पाटो पनि बिर्सिन मिल्दैन । झन् आयातीत विधा भनिंदै साहित्यका अन्य विधाको चेपुवामा निन्याउरो अनुहार पारेको गजललाई नेपालीपन दिन पनि अभिव्यक्तिगत चोखोपनमा ध्यान पुर्‍याउनु उपयुक्त हुनेछ । प्रभाव ग्रहण गरेर आफ्नो शैली प्रखर पार्नु एउटा कुरा हो, तर अदा, इन्तजाम, दिवाना, इरादा जस्ता शब्दको प्रयोगले विशुद्ध नेपाली गजल पढ्ने तिर्खामा हिलो छ्‌यापिदिन्छ ।
संरचनागत पक्षलाई गजलको मूल पाटोको रूपमा लिइने प्रचलन स्वरूप तुलनात्मक रूपमा भावपक्ष र वैचारिक पुट नेपाली गजलले गुमाउँदै गएको पाइन्छ । गजल लेखनको लामो अभ्यासबाट अगाडि बढेर आउँदा संरचनात्मक पाटोमध्येको पर्ने तुकबन्दीयुक्त काफिया र रदिफ संयोजनमै अलमलिएर बस्ने समय अहिले छैन । उसै पनि मात्रा, लय आदि पक्षलाई ध्यान दिंदै लेख्नुपर्ने नियम रहेकोमा काफिया बन्न सुहाउने शब्दहरूको सीमाले नेपाली गजल केही जकडिएको गुनासो गजल लेखकहरूबाट सुनिन्छ । यस्तोमा, एकाक्षरी काफियामा भरपूर खेल्दै पूर्ण काफिया भएको गजलको जस्तै सुललित प्रवाह त्यसमा भर्न सकिने उदाहरण संग्रहमा निरजले पेश गरेका छन् । जुन अभ्यासमा उनी सफल पनि देखिन्छन् । तर वैचारिक पुट दिएर साहित्यिक महत्ताको गजल लेख्‍ने धुनमा मात्रा र लयभंगतिर गजलकार हुत्तिएको ठाउँ धेरै देखिन्छ संग्रहभित्र । त्यसमा सम्हालिएमा उभिने मात्र होइन, गजलकारितामा प्रयोगधर्मिताको वकालत गर्ने निरजको पुस्ताको दौड नै देखिने दिन आउन टाढा छैन ।
स्रष्टा : डा. निरज भट्टराई
प्रकाशक : साहित्य परिवार, नेपाल मेडिकल कलेज, जोरपाटी
मूल्य : १०१ रुपियाँ
पृष्ठ : ५१
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, March 23, 20112: Comments
तिमी हेरिरहेछौ हावाको धारतिर
सायद परको चन्द्रमा
तिमी सानो छँदा
हेर्ने गर्थ्यौ मलाई
म हेर्थेँ तिम्रै सपना घुलेको आँखाले
टोलाउँथेँ पर क्षितिजको दैलोमा
घरक्क उघ्रिहाल्ला कि भन्दै
नजरलाई बनाउँथेँ एकतमास पहरेदार
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, March 22, 20112: Comments
(होलीको अघिल्लो दिन राजधानीको एउटा स्कुलका विद्यार्थी होलीको बिदाअघि रङ्गिएर रमाउँदै)
हामीमा उल्लासको रङ नै हराउँदै गएको हो कि, होलीको रङ वर्षेनि फिका हुँदै गइरहेको छ । होली पर्वको आत्मीयता र सौहार्दताको पाटोलाई पछिल्लो समयमा लुकेर-छलेर अभद्र पारामा हानिने लोला र पिच्कारीको आतङ्कले माइनस गरेको छ । (यसपाला त त्यही लोलाको वर्षा पनि धेरै कम देखियो !) पर्वमा विकृतिले ठाउँ पाएकैले होला, सभ्य रूपले रमाइलो गर्न चाहने मन पनि ‘होली आयो’ भनेपछि ओइलाउने गर्छ ।
मन त कसको चाहँदैन र रङमा भुलूँ, रङ्गीन बनूँ ! तर, होलीमा अचेल अबिर र रङ मुश्किलले देख्‍न पाइन्छ । पहिले-पहिलेका वर्ष सडकछेउमा डङ्गुर रङको पसल थाप्नेहरू अचेल बेलुन र प्लास्टिकको धोक्रोमा खुम्चिएका छन् । हुँदाहुँदा सहरबाट लोलाप्रेमीहरूको बाछिटा गाउँसम्म पुगेको छ । गाउँमा लोला किन्न कन्जुस्याइँ गर्नेहरूको पनि आफ्नै शैली छ - बाल्टिन, अम्खोरा र मगले नै काम चलाउँछन् पानी छ्‌याप्न । उसै पनि सहरभन्दा पानीको फालाफाल नै हुन्छ गाउँमा ।
यस्तै पानी आतङ्कको सिकार हुँदा होली पर्वदेखि नै विरक्ति भएको छ आफूलाई । अहिले पनि अरूहरूले होली खेलेको हेरेर आनन्द लिन्छु, आफू खेल्न भने कसैगरी मन जुरमुराउँदैन । उदयपुरमा छँदा २०५३-५४ सालको कुरा हुँदो हो । १२-१३ वर्षको केटो, चञ्चलता त थियो नै । घरबाट कुन्नि के किन्न चौकतिर झर्नुपर्ने भयो । आफ्नै पारामा उफ्रिँदै हिँडे । होलीको उमङ्गले हा-हा-हो-हो सुनिन्थ्यो टोलभरि । दृश्य देख्‍न नपाइए पनि मान्छेहरू खुबै रमाइलो गरिरहेका छन् भन्ने लख काट्न सकिन्थ्यो । हाँसो र खित्काको गुञ्जन नै उखरमाउलो थियो ।
मुख्य चौक चारबिघे भन्दा अगाडि चुहाडे आउँछ । जहाँ कुसुमको ठूलो गाछीमुनि बस्नको लागि अहिले चौतारा समेत बनेको छ । उतिबेला भने व्यवस्थित थिएन । कुसुम गाछीको छेउमा धेरै पहिलेदेखि चल्नचल्तीमा रहेको इनार अद्यापि छँदैछ । उफ्रिँदै त्यहाँ के पुगेको थिएँ, त्यहाँ त बलियाबाङ्गा दाइहरूले फुच्चा केटाहरूलाई समातेर पानी छ्‌यापिदिँदै रै’छन् । दङ्ग परेर रमिता हेर्न थालेँ । म त राम्ररी चिनेजानेको फुच्चे, फेरि जिम्बाल बाको नाति ! मलाई त केही गर्दैनन् होला भनेर निर्धक्क हेर्दै थिएँ केटाहरू भिजेर मुसो भएको । अलिबेरमा त मैंलाई पो कर्‍याप्प समातेँ । फुत्किन खोजेँ, हलचल गर्न सके पो ! सानैदेखि खिरिलो ज्यानको आफू पाखुरावालहरूको फन्दामा परियो, अघिसम्म रमिता हेर्दै गरेको अब आफैं रमिता भइने भो भनेर इन्तु न चिन्तुको अवस्थामा परेँ । अनि त दुईजनाले समात्‍ने, एकजनाले इनारबाट पानी निकाल्दै ममाथि खन्याउन सुरु भयो । मानौँ म रौँ खुइल्याइसकेको खसी हुँ, अब छुटेरहेका भुत्ला पखाल्न मात्र बाँकी छ ! बिहान ८-९ बजेको समय थियो, बाल्टिनका बाल्टिन पानीको वर्षाले जाडोले कक्रिएँ । पानी खन्याउने दाइ पुस्ताका जैरेहरू रमाइलोमा हाँसिरहेका थिएँ, आफू भने न रुनु न हाँस्नुको अवस्थामा थिएँ । पछि तिनलाई पनि अति गरियो जस्तो लागेछ क्यार, छाडिदिए । आँखाभरि दबदब आँसु पार्दै पसलमा किनमेल समेत नगरी घरतिर फर्किएँ ।
त्यसपछि आजका दिनसम्म होली खेल्न मन कहिल्यै रौसिएन ।
२०५८ सालपछि पढ्ने सिलसिलामा काठमाडौं बस्न थालेपछि ललितपुरको कुपण्डोलमा दाइसँगै बस्न थालियो । आफूले नखेले पनि एक वर्षको होली निकै मादक लाग्छ । वल्लो-पल्लो कोठामा बस्ने दाइ-दिदीले रङ दलेर सास्ती देलान् भनेर बिहानदेखि ढोकामा चुकुल लगाएर बसियो । होली खेल्न मन पर्दैन भने लगाइदिंदैनौं भनेपछि बाहिर र छतमा बसेर अरूहरू खेलेको हेरेर रमाइलो लिन थालियो । हामी बसेको भन्दा पल्लो कोठामा उदयपुर जिल्लाकैअविवाहित भए पनि वर्ष २८ जतिको हाराहारीमा पाका भइहाले, बहिनी रमिला पनि मस्त जवान थिई । सायद यसैले होला होलीको त्यो दिन पहिले त्यसै घरमा डेरा गरेर बस्दाताकाको चिनाजाना केटो सञ्जय साह होली खेल्न भनेर अबिर लिएर आएको । सञ्जय मेरो दाइको साथी, त्यसैले दाइ भन्थेँ । छेउकै कोठामा बस्ने भए पनि अन्तर्मुखी स्वभावको म भने सङ्कोचका कारन विशेष कामबिना उति बोल्दिन थिएँ रमिला र शङ्कर दाइसँग ।
कहिले छतमा अनि कहिले तलको प्यासेजमा टहलिंदै सञ्जय पनि होलीको रमिता हेर्दै थियो । म पनि छतमै बसेर पल्ला घरहरूमा लोला र पिच्कारी छ्‌यापाछ्‌याप गरेको हेर्दै थिएँ । कहिले आफूतिरै निशाना भएर आउँथ्यो लोला, छल्थेँ । एक्कासि तल केटी मान्छे हुलुलु गरेर खित्किएको सुनेँ । यसो हेर्छु त सञ्जयले रमिलालाई अबिर दल्दै रहेछ । मलाई भने हेर्दा पनि कस्तो असहज लाग्यो त्यो दृश्य । पछाडिबाट अँगालोमा कसेर अनुहारमा अबिर रगड्दै सञ्जय आनन्नमग्न थियो । बिचरी रमिला के गरोस्, अँगालोबाट छुट्न खोज्दा पनि झन् लपेटालपेटमा पर्दै थिई ऊ । एउटै घरमा डेरावाल भएर बस्दाको नाताले एउटी उमेरदार केटीलाई एउटा उमेरदार केटोले होलीको बहानामा बाहुपासमा बाँध्यो । त्यो घरमा सँगै बसुन्जेल हातसम्म मिलाएका थिएनन् होला ती दुईले । होलीको नाममा यस्तो गजब पनि हुँदोरै’छ भन्ने ठानेर मलाई भने अचम्म लाग्यो ।
सञ्जय भने अहिले कहाँ छ कुन्नि, रमिलाको भने तीन वर्षजतिअघि बिहे भइसक्यो ।
परार साल राजधानीमा खेलिएको होलीको तस्बिरसहित ब्लग पोस्ट हेर्न यहाँबाट भित्र जानुहोला ।
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, March 19, 20112: Comments
Labels: पर्व-संस्कृति, प्रसङ्गवश
निकैपछि गजल राख्‍दैछु ब्लगमा । डोरिन त प्राय: कवितामै डोरिन्छ र रमाउँछ मन । तर समय र सरसङ्गतिका हिसाबले गजल पनि सुरुवातदेखि नै लेख्‍ने भएकाले चटक्क माया मार्न सकिन्न र बेलाबेला ‘फुरिहाल्छ’ :-)
केही अगाडि अपूरो छाडेको गजललाई काठमाडौँको व्यस्त तर मस्त ठाउँ वसन्तपुरतिर टहलिन गएका बेला निकै गमेर पूरा गरेँ । आज यही गजल धेरै पर्खाइपछि भेटिएकी प्रेमिका जस्तै लाग्यो र ब्लग मार्फत घुम्टो खोल्न हतार लागेर यहाँ टाँसेँ ।
कुन कुरा यहाँ पालना भएको छ र
साकार कहिले सपना भएको छ र ?
जसरी घरधुरीको लगत राखिन्छ,
दु:खहरूको खै गणना भएको छ र ?
रौंचिरा गर्दै अरूका दोषहरू खोज्दा,
कसलाई आफ्नो सम्झना भएको छ र ?
मैले उसलाई हेर्दा के सम्हालिनुपर्ला,
माया कहिले पो वासना भएको छ र ?
बाँध बाँध्दाबाँध्दा हत्ते हुन्थ्यो, थाहा पाउँथ्यौ,
तिम्रो आँखा त्यस्तो झरना भएको छ र ?
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, March 17, 20114: Comments
फोटोहरूको हिमाल आरोहण निकै पटक गरियो । टेलिभिजनमा प्रसारण हुने वृत्तचित्र, बजार र चोकमा टाँसिएको पोस्टकार्ड र पम्प्लेटबाटै हिउँ छोएर लुगलुग काँपियो । तर अहँ, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको मुलुकको बासिन्दा भएको डिङ मात्र हाँकियो अहिलेसम्म, हिउँ छुन पाएको छैन । हिउँ छुन नपाएको पनि कसरी भन्नु ? त्यतातिर केही जाँगर नै चलाइएन । कहाँ-कहाँबाट विदेशीहरू आएर नेपालका कुना-कन्दरामा छाङ मारिसके, आफू भने आफ्नै जिल्लाको चार कुना भेउ नपाएर लाजमर्दो स्थिति हुन्छ । झन् काठमाडौँ खाल्डोमा भासिएपछि त भ्यागुता जति उफ्रियो कान्लामुनिको कान्लामुनि नै भनेजस्तो दुर्दशा हुने रहेछ ।
हिमाल आरोहणमा नेपालमा शेर्पा जातिको बाहुल्य छ । तिनले पनि गाइड र भरियाको रूपमा कमाइ गर्न जानुपर्ने बाध्यतावश हिमालसँग नजिकिने अवसर पाए । नत्र हिमालको काखमै लडिबुडी खेल्दै हुर्किने शेर्पाहरूमा हिमाल भन्नु आरोहण र सफलताको साहसिक नाम हो भन्ने साहसले हाँक दिने थिएन होला । म जस्ता धेरै मान्छे होलान्, जसलाई वर्षायाममा राजधानी र अन्य पहाडी भेगको आसपास पर्ने हिउँसँग जिस्किने मेलोमेसो पनि खै किन जुर्दैन । अनि तिनै तस्बिर र वृत्तचित्रमा देखिने हिमटाँकुरा र हिउँका डल्लाहरूमा काल्पनिक कुश्ती खेल्दै कुतकुतिन विवश भइन्छ ।
तलका दुई तस्बिर भने गोरखा दरबारको गोरखनाथ मन्दिरको थुम्को उक्लिँदा पुस महिना ताका खिचेको हुँ । तपाईँ पनि तस्बिरमै भए पनि हिउँचुलीमा टहलिनुस् एकछिन !
निक्खर सेतो हिमाल मात्र के राम्रो छेउछाउमा हरियाली नभए ?
अझ नजिकबाट छिल्लिने जमर्को
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, March 13, 20114: Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, March 11, 20110: Comments
हेर्नू बुढेसकालमा -
अनेकौँ घाम-पानी झेल्दै
जोगाउँदै लगेको आफ्नो अनुहार हेर्नू
अनुहारको डायरी पल्टाउँदा
मेरो चुम्बनकै ओसले
गल्दै-झोल्लिँदै गएको पाउनेछ्यौ
मुसार्दा टसमस हुने छुइनँ
चाउरीहरूमा गढेरै बस्नेछु
खै, के-के भएथे उतिबेला
थाक्छ्‌यौ पनि होली ….
झन् बूढी हुँदी हौ
पऽऽछि कुनै दिन
मेरो मायाको निशानी
भइदेला तिम्रो लागि
पछुतोको गहिरो-गहिरो डाम ।
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, March 04, 2011 1 : Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, March 02, 2011 1 : Comments